Sida ay magaceeda soo jeedin, SyncMate loo isticmaalaa in lagu sii xogta aad u hagaagsan u dhexeeya Mac iyo qalabka Android / macruufka. Xogta waxay u hagaagsan karo waxaa ka mid ah xiriirada, SMS, jadwalka taariikhda, wicitaanada, galalka, Bookmarks Safari, iPhoto iyo Lugood. Ka sokow, waxaad kortaan kartaa qalab aad sida disk drive dibadda, taasoo u fududaynaysa oo ku habboon si aad u maamuli content on Mac. Si kastaba ha ahaatee, waxaa wali tahay arrimaha cillado fara badan oo laga yaabo in aad la kulanto marka la isticmaalayo SyncMate .
Inta badan waxa ay ka kooban u hagaagsan karo ma aha lacag la'aan. Si aad u isticmaasho version dhoofinta, in aad bixiso waxa loogu talagalay.
Waxaa kaliya ee la jaan qaada OS X Mac 10.8 iyo ka dib.
Khaladaadka ka muuqan markii syncing jadwalka Muuqaalka iyo Google iyo xiriirada.
1. Wondershare TunesGo Mac, 17.65M
$39.95 / Lifetime Via cable USB
2. iSyncr Mac: 2 Milyan
Android: duwan la Android $ 9.99 Via cable USB, WiFi
3. doubleTwist Mac, 15.3MB
Android: duwan la Android WiFi function: $4.99 Via cable USB, WiFi
Wondershare TunesGo (Mac) ama Wondersgare TunesGo (Win) waa Lugood ah u software Android, ha waxaad isticmaali Lugood si aad u maamusho Android ama kiniin ka Mac ku haboon. Iyada oo ay caawimo, aad u hagaagsan kartaa music, playlists, filimada iyo ka badan oo u dhexeeya Lugood iyo Android, iyo jiididda iyo hoos u music, video, playlists, sawiro iyo document files ka Mac si ay Android.
Xulo u hagaagsan Lugood files warbaahinta in ay Android.
Jiid oo dhibic music, filimada, sawiro iyo waraaqaha kombiyuutar si ay Android
Nadiifi songs nuqul Lugood iyo hagaajin ID music 3 info.
Si buuxda u la jaan qaada Android 2.1 iyo kor.
Si fiican u shaqeeyaan Samsung, HTC, Sony, LG, Huawei, Motorola, ZTE, Google iyo in ka badan.
Ma u baahan tahay inaad bixiso.
Ma hagaagsan kartaa xiriirada, SMS, Bookmarks iyo faylasha kale.
Ma taageeri WiFi.
iSyncr waa aalad si cadaalad ah iftiin si hagaagsan playlists Lugood in phone Android oo kiniin muuqan. Waxaad ku samayn kartaa la cable USB ah ama ka weyn WiFi. Waxaa tahay version desktop iyo Android version, waxaad dooran kartaa in aad doonayso version oo uu leeyahay isku day ah.
Hagaagsan Lugood playlists oo dhan si qalabka Android.
Ma loo isticmaali karaa marka Samsung Kies la geliyo.
Ma awoodo in uu u hagaagsan loo doortay Lugood files warbaahinta in qalab Android.
doubleTwist waa ciyaaryahan miisaanka music for phone Android iyo kiniiniyada. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu hagaagsan iyo maarayn Lugood music, sawiro iyo videos in telefoonka aad Android oo kiniin ah. Waxa kale oo aad ku dari kartaa music, sawiro iyo videos ka PC ama Mac, waxa uu, si aad iyaga ka ciyaari karaa go ka. Intaa waxaa dheer, waxay ku siinaysaa dukaanka music, suuqa Android oo podcasts baadhaan, waayo, waxaad si aad u ogaato files warbaahinta doonayay.
3 qeybood oo loogu talagalay Mac, PC iyo Android.
Si fudud u hagaagsan Lugood files warbaahinta in ay Android.
Ku dar files warbaahinta ka computer in ay u ciyaaro.
Ma taageeri qalabka socda Android 4.3 (via cable USB a).
3 Hababka in ay ku xidhmaan Android inay Mac
Top 4 Lugood Badeli kara ee Android
Top 4 lagu bedelan karo doubleTwist
2 Siyaabaha Copy Music ka Mac si ay Android
Bedelka Wax kasta ka Lugood in Android
3 Siyaabaha u hagaagsan Lugood Music in Samsung
2 Siyaabaha Bedelka Music ka Lugood in HTC
Nidaameed Lugood Music la Android
Top 3 Beddelka iSyncr u Mac / PC
Kale Freecorder: A More boosaska badan, Advanced Video Converter
> Resource > bedelan karo > Top 3 SyncMate lagu bedelan karo si ay u gudbiyaan Lugood si fudud Android